महाभारतका यी पाँच पात्र बारे तपाईंलाई के थाहा छ ? - Dainik Online Dainik Online
महाभारतका यी पाँच पात्र बारे तपाईंलाई के थाहा छ ?
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७७, आइतबार ५ : ५८
महाभारत हिन्दू धर्म संस्कृतिको महत्वपूर्ण ग्रन्थ हो ।
महाभारतमा कयौं यस्ता पात्रहरु छन् जसको भूमिका निकै महत्वपूर्ण थिए । महाभारतको कथामा उनीहरुको कुनै न कुनै रुपमा निकै ठूलो भूमिका रहेको थियो ।
महाभारतका केही महत्त्वपूर्ण पात्रहरुका बारेमा हामी यहाँ उल्लेख गर्न गइरहेका छौं ।
महाभारतका एक महत्त्वपूर्ण पात्र हुन् शकुनी । शकुनीका कारण नै महाभारतको युद्ध भएको थियो । उनी कौरवका पक्षबाट लडेका थिए ।
दुयोर्धनका मामा समेत रहेका शकुनी पाण्डवहरु मात्र नभइ कुरु वंश नै नाश गर्न चाहन्थे । उनका हर्कतको पछाडि उनीसँग भएको अत्याचारको कथा लुकेको छ ।
भीष्म पितामहले जब धृतराष्ट्रका लागि गान्धारीको हात माग्न गए तब शकुनीलाई यो कुरा मन परेन किनकी धृतराष्ट्र नेत्रहीन थिए । धृतराष्टसँग गान्धारीको विवाहको विरोधमा थिए सकुनी । तर गान्धारीको विवाह धृतराष्ट्रसँग नगर्दा समस्या उत्पन्न भयो र त्यसका लागि सकूनी बाध्य भए ।
उनमा प्रतिशोधको भावना थियो । त्यसपछि शकुनीले पाण्डव र कौरबका बीचमा प्रतिशोधको भावना उत्पन्न गराए । नेत्रहीन भिनाजु(धृतराष्ट्र) लाई उनले राजकाजमा सहयोग गरे र पाण्डवहरु विरुद्ध उस्काए जसका कारण युद्ध भएको थियो ।
अनुपम सौन्दर्यको मालिक द्रौपदी सर्व गुणसम्पन्न कन्या थिइन् । उनको विवाह एक उच्च राजशी कुलमा भएको थियो तर कुन्तीको एक बचनले उनी पाँच पतिको पत्नी बनेकी थिइन् । यसपछि उनले आफ्नो जीवनको धेरै समय वनवासमा विताएकी थिइन् ।
द्रौपदीका विषयमा महाभारतमा धेरै कथाहरु छन् । केहीले उनको अभिमानका कारण महाभारत युद्ध भएको बताउने गरेका छन् भने केहीले उनीमाथिको अत्याचारका कारण युद्धको अवस्था बनेको थियो । राजसभामा मानिसहरुका बीचमा दुशासनले उनको चीरहरण गरेपछि द्रौपदीले आफ्ना पाँच पतीसँग दुर्योधन र दुशासनको हत्याको शपथ लिन लगाएकी थिइन् ।
भीष्मपितामह महाभारतका यस्ता महत्वपूर्ण पात्र हुन् जसले विपक्षी पाण्डव विरुद्ध लडाइ लडिरहँदा उनीहरुको जीतको कामना गरिरहे । कौरव सेनाका सेनापति समेत रहेका भीष्मले लिएको प्रतिज्ञालाई आज पर्यन्त पनि सम्मानका साथ लिइन्छ ।
उनले लिएको प्रतिज्ञाका कारण उनले विवाह गरेनन् र सिंहासनको रक्षाका लागि अन्तिम समयसम्म लडिरहे । इच्छा मरणको बरदान पाएका भीष्मपितामहका प्रिय थिए अर्जुन । भीष्म उनै अर्जुनको बाणका कारण शैयामा परे र आफ्नो जीवन त्याग गरे ।